ओलीको दावी: चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन, कसैलाई खुसी पार्न यो सरकारले सम्बन्ध बिगार्‍यो - Himali Patrika
ओलीको दावी: चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन, कसैलाई खुसी पार्न यो सरकारले सम्बन्ध बिगार्‍यो
हिमाली पत्रिका २० भाद्र २०७८, 7:49 am
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको भन्दै वर्तमान सरकारले अनावस्यक रुपमा चीनसँग तनाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु । चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन । यो सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध तनाबग्रस्त बनाउँदै गएको छ । कसलाई खुसी पार्न चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनुपर्‍यो ?’ नेता ओलीले भनेका छन् ‘यो सरकारलाई म चुनौती दिन चाहन्छु । यो समितिले चीनसँग सीमा विवाद भएको देखाओस् । भारतसँगको सम्बन्ध तनाबग्रस्त बनाउँदै लगेको छ । चीनसँगको सम्बन्ध तनाबग्रस्त बनाउँदै लगेको छ ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै हुम्ला जिल्लास्थित चीनसँग सीमा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अध्ययन टोली बनाएको थियो । चीन सरकारले भने नेपालसँग सीमा विवाद नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
सोही प्रसंग कोट्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग यस सरकारले अनावस्यक रुपमा तनाब उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाए । शनिबार राजधानीमा आयोजित महानगरपालिकास्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तै उनले एमसीसीबारे यो सरकार नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एमसीसीबारे नबोलेको र जनतालाई नझुक्याउन समेत आग्रह गरे । ‘शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त ! उहाँहरु चुपचाप हुनुन्छ ।’
यस्तै उनले विकास हुन्छ भन्ने डरले आफूले शिलान्यास गरेका दुई सय वटा सडक ठेक्का रद्ध गरेको आरोप लगाए । साथै एमाले कसैको बैसाखी टेक्ने पार्टी नभएको समेत उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै उनले एक्ला एक्लै चुनाव लडे उनीहरुको जमानत जफत हुने चेतावनी दिए । आगामी चुनावपछि एमालेको एकलौटी सरकार बन्ने समेत उनले ठोकुवा गरे । ‘एमाले कसैसँग बैसाखी टेक्ने पार्टी होइन । हामी जनताको बीचमा जाँदा अरुलाई गाली गरेर होइन काम लिएर जान्छौँ’ उनले भने ।
वर्तमान सरकारलाई उनले ‘गरिबमारा सरकार’ भएको समेत आरोप लगाएका थिए । सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई गरिबमारा सरकार भएको आरोप लगाए । ‘यो सरकारले गरिबमाथि बञ्चरो चलायो । त्यसपछि सरकारले विकास निर्माणका काम भत्काउन थाल्यो’ नेता ओलीले भने । साथै यस सरकारले कुनै रचनात्मक काम नगरेको पनि उनको आरोप थियो ।